योनिमा वीर्य झार्दा महिलाहरु मोटाउन्छन् त ? – Khabar Art Nepal
वास्तकिता यस्तो छ
By खबर आर्ट नेपाल	 On ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०२:३६
म २८ वर्षकी भएँ । विवाह भएको चार वर्ष भयो । हाम्रो एउटा छोरा छ । यौनसम्पर्क गर्दा श्रीमानले जब वीर्य योनिमै झार्नु हुन्छ तब लिङ्ग बाहिर निकाल्दा सबै वीर्य बाहिरै आउँछ, किन होला ? अनि म साह्रै पातली छु । परिवार नियोजन गरेमा वा श्रीमानले योनिमा झारेको वीर्य बाहिर नआए मोटाइन्छ रे, के यो सत्य हो ?
फेरि यो कुरा योनिमा वीर्य स्खलन भएको स्थितिमा पाइने होइन । वीर्य योनिबाट ननिस्किएको कारणले मोटाइने होइन । तपाईं यदि मोटाउन चाहनुहुन्छ भने पोषण एवं व्यायाममा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ, न कि वीर्य योनिबाट बाहिर निस्कन नदिनुमा ।
-कान्तिपुर साप्ताहिकबाट साभार